🥇 ▷ EISA waxay ku abaalmarisay OnePlus laba abaalmarino sharaf leh ✅
EISA waxay ku abaalmarisay OnePlus laba abaalmarino sharaf leh
OnePlus wuxuu ka helay laba abaalmarin xeerbeegti caalami ah khabiirada sawirka khibradda iyo codka (EISA), taleefoonnada Wireless In-Ear ee ugu wanaagsan 2019-2020 ee Bullet Wireless 2 iyo taleefanka casriga ah ee ugu fiican sanadka ee OnePlus 7 Pro.
“Aqoonsiga EISA ee hal-abuurnimadeena OnePlus 7 Pro iyo Bullet Wireless 2 waxay caddeyn dheeraad ah u tahay in istiraatiijiyadeena ay shaqeyneyso iyo inaan sii wadno inaan la wadaagno macaamiisheenna tikniyoolajiyada adduunka ugu fiican”, ayuu yidhi Pete Lau, aasaasaha iyo maamulaha shirkadda OnePlus. “
OnePlus waxaan si taxadar leh u dhagaysanaynaa baahiyaha adeegsadayaashayada oo aan hirgelinnaa xallinta xallinta dhibaatooyinka dhabta ah iyadoo aan bixinayna khibrad aan caadi ahayn. Abaalmarinta EISA waxaa bixiya khubaro warshadeed oo ka kala yimid adduunka oo dhan, sidaas darteed, sharaf ayey noo tahay in sidan loo aqoonsado. ”
The OnePlus 7 Pro ayaa jiray lagu abaal mariyey sida ugu fiican casriga casriga ah 2019/2020 u beddelashada warshadaha casriga ah iyadoo la soo bandhigayo shaashadda kacaanka QHD + dareeraha AMOLED ee ka shaqeeya 90 Hz oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku raaxaystaan ​​daawashada muuqaalka maqalka iyo ciyaaraha fiidiyowga ee dheecaanka weyn iyo faahfaahinta buuxda.
Dhinacyadeeda, ‘OnePlus Wireless 2 Bullet’ ayaa ka faa iideysanaya khibradda maqalka ee shirkadda si ay u bixiyaan noocyo kala duwan oo cod ah iyo dhawaacyo kordha, marka lagu daro caddeynta weyn ee codka, qaabeynta cusub.
Bullet Wireless 2 waxay bixiyaan tikniyoolajiyad hal-abuurnimo oo hadda jirta oo ay ku jiraan alaabo kale oo OnePlus ah, sida Warp Charge, kaasoo u oggolaanaya dadka isticmaala inay ku raaxeystaan ​​muusikadooda muddo dheer markii ay awood u leeyihiin inay ku dallacaan taleefannadooda dhagaxa ah daqiiqado yar gudahood.
Abaalmarinta EISA waxaa abaalmarin guddi ka ah 62 xubnood oo caalami ah, kuna baahsan adduunka oo dhan. Dhammaan xubnaha EISA waa aqoonyahanno aqoonsi u leh dhulkooda waxayna qayb ka yihiin abaalmarinta macaamiisha ugu weyn ee madax-bannaan ee adduunka.